Faits-Divers – Page 1027 – Midi Madagasikara
Mahalavolona Andoharanofotsy : Jiolahy nanafika, vehivavy iray voaholana, lasa ny vola 800 000 ar
Redaction Midi Madagasikara 25 juin 2014
Ny 23 jiona teo tokony ho tany amin’ny sasak’alina no nanafika tokan-trano iray tao Mahalavolona Andohoranofotsy ireo jiolahy tsy fantatra isa ary tsy nitondra basy. Nihanika tamboho izy ireto tamin’izany ka tonga dia tafiditra tao antokontany. Henon’ilay mpiambina ny tanàna moa izy ireo tamin’izany ka saika hanohitra ity farany no nokapain-dry zalahy tamin’ny antsy ny…
Anosy – Ankorondrano : Vehivavy miboridana namakivaky ny tanana
Redaction Midi Madagasikara 24 juin 2014
Tsy dia mbola antitra loatra ary tsy tanora intsony koa ilay olona. Variana ny rehetra nahita azy Omaly maraina no nahitan’ny olona an’ity vehivavy iray, tsy misy akanjo na dia takon-kenatra aza, nandeha teny amin’ny lalana Ankorondrano. Miboridana tanteraka. Dia samy gaga ny rehetra nijery azy. Tamin’iny fizarana ny lalana iny izy no nandeha. Tsy…
Toamasina # Trano 5 may , olona maro naratra. Ny 21 jiona teo dia nitrangana hain-trano tao Tanamakoa. Tsy fantatra marina ny antony nahatonga ny firehetana fa dia nahery vaika tokoa, ka tokantrano miisa 5 no kila forehitra, ary olona 19 no naratra vokatry ny afo.Niteti-bidy tany amin’ny 223 000Ar kosa ny entana may. Nossy-be #…
Port Toamasina : Mpangalatra solika efa-dahy maty
Nirefotra ny « container » fampiasain’izy ireo amin’ny halatra solik a. Tombotsoa Ruffin (serza miaramila), 21 taona ; Raharimalala Danielson, 45 taona ; Rahanja Harison Gaetan, 30 taona saofera taxi, ireo no anaran’ireo maty. Nisy iray hafa ihany koa hita tao anatin’ny « container » rehefa maty ny afo. Omaly dia mbola miady aman’aina i Zaho Victor, 30 taona; Erneste 38 taona;…
Anosibe Angarangarana : Jiolahy nanafika, najifa ny vola 4 225 000 ariary
Ny marainan’ny alatsinainy lasa teo, tany ho any amin’iray ora, no nisy andian-jiolahy 7 nanafika tao amin’ity tokantrano iray. Trano lehibe iray moa no misy ireto mpiara-monina ireto ary samy mpivarotra avokoa, sady mpihavana ihany koa. Tokantrano 4 samy hafa izy ireo. Tonga dia nizara ireto jiolahy nanao ny fanafihana ka ny 3 tamin’izy ireo…
Itaosy hopitaly : Taxi-be tapaka frein, vehivavy 1 maty, 11 naratra
Ny alatsinainy maraina teo no nisehoan’izany, teo ampita indrindra amin’ny misy ny vavahadin’ny hopitaly etsy Itaosy. Taxi-be ligne A mampitohy an’i Tsaralalàna sy hopitaly no nilaozan’ny tsindry hisatra. Raha ny fitantaran’ny olona tao anatin’ny taxi-be dia teo anoloan’ny fiantsonana mialoha ny farany amin’ny fidinana iny no tsy nisy frein intsony ity fiara, ka niteny tamin’ilay…
Vol de carburant dans le Grand Port : L’explosion d’un container a tué quatre personnes
La manœuvre est bien orchestrée, très bien même que cela a tourné au cauchemar pour les trafiquants. Un container est posé tout juste au-dessus du circuit du pipeline, en partance du tanker et à destination du port de Toamasina. Un artifice pour tromper les éventuels contrôles des responsables. L’endroit se situe bien entendu dans l’enceinte…
Ankorondrano : Fisolokiana varotra basy, 5 mianadahy voasambotra
Ny 21 jiona teo no tratra ireo olona 5 ka vehivavy ny iray. Mpisandoka ireto olona ireto ary olona tsara sitrapo no nampandre ny polisy misahana ny heloka bevava sakelika faha 5 . Heno araka ny vaovao fa misy olona mitady mpividy basy eny Antanimena. Natao avy hatrany ny vela-pandrika teny Ankorondrano ka raikitra fa eny…
Ambohimarina Ambohimanga Rova : Le général Ravalomanana fait surface inauguration des maisons des Gendarmes
Redaction Midi Madagasikara 23 juin 2014
Samedi matin dernier, la gendarmerie nationale a inauguré de nouvelles infrastructures. Le général Ravalomanana était le maître des cérémonies, il a invité le Maire, les hautes personnalités au niveau de la gendarmerie et la population du quartier. Il a présenté les gens de bonne volonté en donnant du terrain pour l’infrastructure, et la Mairie d’Ambohimarina…
67ha sy Besarety : Nanjaka ny hain-trano !
Vao maraina dia efa niledaleda ny afo tetsy Ankasina-67ha, omaly. Trano lehibe iray izay mpivarotra ny ankamaroan’ny olona mipetraka ao, raha araka ny fantatra, no ravan’ny afo. Vokatry ny “court-circuit” raha araka ny vaovao azo momba ity hain-trano ity no nitarika ny loza. Tsy nisy olona tao an-toerana tamin’io fotoana io, fa samy namonjy ny…
← Previous 1 … 1 026 1 027 1 028 … 1 155 Next →